Samo - Gpedia, Your Encyclopedia
(Waxaa laga soo toosiyay Samo)
Cir oo meel sare laga sawiray diyaarad dusheed
Cir (Af-Ingiriis: Sky or Atmosphere) waa dahaarka sare ee aduunyada taas oo ka samaysan neefo iyo uumi biyo.
1 Cirka Dhulka
2 Cimilada Dhulka
Sawirka dhulka oo laga sawiray dayaxa dushiisa.
Cadaadiska oogada cirka isku cel-celiskiisu waa 101.325 (kPa), laga soo bilaabo dherer dhan 8.5 km. Waxaanay ka kooban tahay 78% nitrojiin iyo 21% Ogsajiin ah, iyo xoogaa yar oo uumi biyo ah iyo Kaarboon labo Ogsaydh iyo neefo kale. Dhererka cirku u jiro oogada dhulka waa kala duwan tahay, waa 8 km cidhifyada iyo 17 km dhulbadhaha.
Maqaarka cirku aad ayuu muhiim ugu yahay nolosha dhulka, caawinta wareega biyaha sida roobka iyo difaacida falaadhaha khatarta badan ee ka yimaada qoraxda ayaa ka mid ah faa'iidooyinka cirka. Sidoo kale, aqalkacagaaran (greenhouse) oo ka samaysan uumi biyo, kaarboon-labo-ogsaydh, miithayn (methane) iyo ozoneka oo masuul ka ah dheelitirka heerkulka dunida ayaa ka mid ah faa'iidooyinka cirku u leeyahay dhulka.
Cirka dhulku ma lahan wax xad ah, si tartiib ah ayuu u noqonayaa khafiif sababo la xidhiidha wasakhowga hawada darteed. 3/4 muga cirka dunidu wuxuu u jiraa oogada dhulka 11 km oo kali ah, kuleylka ka imanaya qoraxda markuu soo gaadho meeshan wuxuu keenaa in hawadu kala baxdo ka dib ku qaboowda lakabka saree cirka. Taas ayaa keenta isbedelka cimilada, sida roobka, dabaylaha IWM.
Badaha waaweyn ayaguna qayb ayay ka yihiin isbedelka cimilada, sababto ah uumiga biyuhu wuxu ka yimaada badaha, kuwaas oo ku qabooba cirka dibna ugu soo noqda dhulka ayagoo roob ah.
Biyaha roobka ayaa sameeya wabiyada iyo haraha leh biyaha macaan. Isku-wareega biyaha ee noocan (water cycle) ayaa si fiican u taageera nolosha iyo dhulkaba.
Cimilada dhulka waxaa loo kala saari karaa waaxyo badan ayadoo la tixraacayo heerkulka iyo roobka. Nooca ugu caansan kala saarka cimilada, Köppen climate classification oo uu sameeyay Wladimir Köppen, ayaa loo kala saaraa shan qaybood oo kala ah: saxare qalayl ah, torobika (tropics), dhulka sareeya, qaboow-dhexe iyo qaboowga cidhifyada, kuwaas oo weli la sii qeeybiyo.
Habka sameeynta cuntada ee dhirta (Photosynthesis) ayaa asna kaalin libaax ka qaata dheelitirka hawooyinka cirka, sababto ah dhirtu waxay isticmaashaa kaarboon-labo-ogsaydhka kuna sii daysaa cirka ogsajiin saafi ah. Haydarojiin oo ayadu ku badan cirka ayaa la falgasha Ogsajiinta dhirtu soo daysto taas oo ayadna dhalisa isku dhisyo biyo ah oo keena roob.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Cir&oldid=169703"